Alahady 18 Aprily 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
“MAMPIORINA NY MINO NY FANAVOTAN’I KRISTY”
Alahady faharoa manaraka ny Paska ity alahady ity, mbola hibanjinana ny lohahevitra eo amin’ny sahan’ny FJKM, hoe « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy ».
RASOLONJANAHARY Fidy, Diakona, ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina RAKOTOMALALA Finaritra no nitondra ny hafatra. Litorjia endriny faharoa no notanterahana.
Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 7 ora maraina no hotaterina eto.
Feon-javamaneno no teo am-pidirana. Rehefa vita ny fiarahabana apostolika ho fanomanana ny fo amam-panahy, dia novakin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 95: 1-7a, ho fiderana an’Andriamanitra.
Nohiraina ny hira FF 45 « Hira fiderana » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika. Nidera sy nanome voninahitra an’Andriamanitra. Nisaotra Azy fa tsy noho ny herin’ny tena fa noho ny halehiben’ny fitahiany sy ny fitiavany ary ny famindram-pony no hiombonam-po amam-panahy hiderana Azy. Tsy mendrika, ka mangataka famindram-po sy famelan-keloka. Mangataka ny hanamasinany ny fotoana, mangataka ny herin’ny Fanahy Masina hitomboana amin’ny fahamasinana mba hifanaraka amin’ny sitrapony sy ho endriky ny famirapiratan’ny voninahitr’Andriamanitra izao fotoana izao.
Natao avy hatrany ny hira FFPM 177: 3-4 « Ry Fanahy Mpanazava! » mialoha ny vakiteny. RANDRIAMASIMANANA Mamisoa Haja no nanolotra ny perikopa voalahatra ao amin’ny Testamenta Taloha : Isaia 48 : 11-22 sy Testamenta Vaovao : Marka 10 : 41-45 ary ny Hebreo 2 : 14-18, izay novakina misesy. Nivavaka izy mialoha izany. RANDRIAMASIMANANA Norosoa no namaky ny Soratra Masina. Samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Vola ireo tompon’anjara ireo.
Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 382: 1-2 « Ry olo-matory ô! Mba mifohaza » mialoha ny toriteny.
“Mampiorina ny mino ny fanavotan’ny Tompo”
Ny Epistily ho an’ny Hebreo no nangalan’ny Mpitandrina RAKOTOMALALA Finaritra ny hafatra.
Hita tamin’izany fa:
-Jesoa Kristy, Ilay Mpisoronabe manavotra ireo meloka,
-Jesoa Kristy, Ilay Mpisoronabe mamonjy izay alaim-panahy.
Im-pito ambin’ny folo no miverina ny teny hoe “Mpisoronabe” ao amin’ny Bokin’ny Hebreo. Ny atao hoe Mpisorona dia olon’Andriamanitra nofidiny manokana ho mpanelanelana amin’ny olona.
Ao amin’ny Testamenta Taloha, ny Mpisorona dia ao anatina taranaka voafidy, dia taranak’i Arona ihany, izay afaka mampifandray ny olona amin’Andriamanitra. Masina noho izany ny Mpisorana, izy ihany no afaka mikarakara ny sorona, afaka mandray ny fanatitra.izay omen’ny olona. Jesoa Krisy no afaka miditra ao amin’ny Tempoly Masina indrindra. Hoy Andriamanitra hoe: “Izy Ilay Mpisoronabe”. Izy no afaka mampifandray antsika amin’Andriamanitra.
Jesoa Kristy, Ilay Mpisoronabe manavotra izay meloka (Hebreo 2:17)
Rehefa mitondra fanatitra fa nanota dia ny Mpisorona no manao ny fombafomba rehetra hanalana ny fahotana. Rehefa mpanota isika dia tsy tafavoaka ao anatin’ny heloka, ka mila an’i Jesoa hanavotra antsika. Jesoa Kristy no fanatitra hanalana ny fahotana ao amintsika, noho ny ràny mba hahafahantsika hifandray amin’Andriamanitra.
Amin’izao vanim-potoana izao dia mifanalavitra ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra ka mila an’i Jesoa Kristy isika izay nanolotra ny ainy, ny ràny mba hahafahantsika mifandray amin’Andriamanitra. Hita ao amin’ny Jeremia 31 hoe: “ny fahotany sy ny helony dia tsy ho tsarovako intsony noho ny ilay rà nilatsaka”. Hofafan’Andriamanitra ny heloka sy ny fahotana nataontsika.
Tsy vitantsika amin’ny herintsika samy irery ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra fa mila an’i Jesoa Kristy isika. Mitebiteby isika amin’izao fotoana izao. Raha vao marary dia mitaintaina. Tsy manana fiadanam-po, fiadanana na ara-panahy na ara-batana. Ilay Mpisoronabe hanafaka antsika amin’izany fitaintainana izany sy hampifandray antsika amin’Andriamanitra.
Miantso antsika izao Teny izao mba hiverenantsika, hifandraisantsika amin’Andriamanitra.
Jesoa Kristy, Ilay Mpisoronabe mamonjy ireo izay alaim-panahy (Hebreo 2:18)
Jesoa Kristy, talohan’ny nanombohany ny asany dia nalain’ny devoly fanahy. Ny voalohany dia nasain’ny devoly novainy ho sakafo ny vato. Toa izany isika, ny fakam-panahintsika dia ny sakafo, tena laharam-pahamehana. “Fa Izy kosa namaly ka nanao hoe: « Voasoratra hoe: Tsy ny mofo ihany no hiveloman’ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra” (Deo. 8. 3). Ny Tenin’Andriamanitra no nandresen’i Jesoa izany Ny Tenin’Andriamanitra dia manome hery. Tsy tantara fotsiny ao amin’ny Baiboly izany.
Ny Tompo mampanantena fa homeny hery ianao. Hoatra ilay renim-pianakaviana nomeny diloilo. Fantatr’Andriamanitra izay ilainao. Na tsy misy aza dia Andriamanitra miaro ny zanany. “Ny zanako sy ny asan’ny tanako dia aoka ho adidiko ihany” (Isaia 45:11b). Ka maninona no miahiahy? Tsy matoky ve ianao fa zanak’Andriamanitra?
Ny fakam-panahy faharoa nataon’ny devoly an’i Jesoa dia ny fahefana. Ny olombelona tia manana fahefana. Fantatr’i Jesoa izany. Misy izany any am-piasana, any an-tokantrano amin’ny lafiny isan-karazany ka manjary tsy manam-potoana intsony hifandraisana amin’Andriamanitra fa sahirana. Mila an’i Jesoa hanavotra antsika amin’ny fakam-panahy eo amin’ny fiainana, amin’izay rehetra mampisaraka antsika amin’Andriamantra. Mila vonjena isika.
Maro samy hafa ny endriky ny fakam-panahy. Ohatra: tsy matoky dokotera, tsy atokisana ny fanafody, henoina daholo izay lazain’ny olona … Amin’ny maha kristiana dia Jesoa Kristy no ilaina voalohany. Izy no hamonjy amin’ny fakam-panahy.
Inona ny ady lalovanao amin’izao fotoana izao ankoatra ny Covid? Ny ady manakorontana ny fiainanao ka hilanao Mpisoronabe, mba hiverenana amin’Andriamanitra?
Mila mifandray be be kokoa amin’Andriamanitra isika.
Jesoa Kristy dia manafaka amin’ny heloka ka mila manatona Azy, mibebaka hanafahany amin’ny fahotana. Jesoa Kristy mamonjy ao anatin’ny fakam-panahy, izay alaim-panahy. Miantso Izy ankehitriny, mampanantena fa mamonjy.
Mila mifandray tsara amin’Andriamanitra isika hahafantarantsika ny tena sitrapony, koa mila manatona an’i Jesoa Kristy Ilay Mpisoronabe.
Misaotra ny Tompo noho ny Teny nampitondrainy ny Mpanompony. Jesoa Kristy nanao sorona ny tenany hisolo heloka teo amin’ny hazofijalia na, mba hananana antoka amin’ny fiainana mandrakizay, mba hivelomana ka handinihana tena, manoloana ny sorona nataony, mba hirosoana be be kokoa amin’ny fanolorantena. Izany Teny izany no entina hiatrehana izao herinandro vaovao izao, ka tsy hanana fanahiana satria manana an’i Jesoa, ka ho Mpandresy
Niarahan’ny Fiangonana nanonona, teo am-pitsanganana, ny Fanekem-pinoana laharana faha 2 ho fanehoana ny fitiavan’Andriamanitra sy hijoroana ho vavolombelona.
Vita izany dia nipetraka, nivavaka mangina tao anatin’ny feo-javamaneno.
RAZAFIMAHARO Maminirina, Mpitantsoratry ny Fiangonana no nanatanteraka izany. Teo am-panombohana dia novakiny ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I Kor. 17: 3b « fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany. »
Toy izao manaraka izao no santionan’ny ilaina fantarina:
*Fandaminana vaovao manomboka ny alahady 25 aprily: manoloana ny fivoaran’ny aretina covid-19 eto Madagasikara, taorian’ny fakan-kevitra teo amin’ny Mpihevidraharaha ny sabotsy 17 aprily:
-hisokatra ny Fiangonana ary manatanteraka ny asa fanompoany ny tsirairay araka izay azony atao ary mifampitsinjo hatrany amin’ny ara-pahasalamana,
-fanompoam-pivavahana tokana ny alahady, amin’ny 7 ora sy sasany, tsy maharitra mihoatra ny adin’ny iray sy sasany. Tsy misy intsony ny amin’ny 10 ora
-halefa mivantana ao amin’ny Facebook ny fanompoam-pivavahana
-haato ny fivoriana misy fiaraha-misakafo sy mety hanalana aro-vava maharitra (hetsika fanatanjahan-tena, hira)
-misy ny fanompoam-pivavahana zoma hariva, aroso amin’ny 5ora sy sasany ny fotoana
*Fepetra ara-pahasalamana ato am-piangonana
-ferana ho 100 ny olona manatrika fanompoam-pivavahana na fivoriana
-hajaina hatrany ny elanelana 2 metatra ary tsy azo esorina mihitsy ny aro-vava
-tsy manatona ny Fiangonana ireo mbola mararin’ny Covid, na en convalescence, na nifangaro tamin’ny olona voan’ny covid-19; toy izany koa ireo mikohaka, na ny voan’ny sery, na ny mafana hoditra,
-fanasana tanana amin’ny “gel” mialoha sy aorian’ny rakitra sy mialoha ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo,
-rarahana ranom-panafody ny Fiangonana mialoha sy aorian’ny fanompoam-pivavahana
*Fandaminana mahakasika ny fiainam-piangonana
-fahoriana voamarina fa tsy covid-19: azo atao ny fanompoam-pivavahana fampaherezana aty am-piangonana, manaraka ny fepetra,
-mpianatra Soratra Masina: apetraka amin’ny Vaomieran’ny Asa Vavolombelona ny fitsinjovana azy ireo,
-fianarana Sekoly Alahady: miato. Manentana ny mpianatra sy ny ray aman-dreny hanao ny famerenana amin’ny alalan’ny boky lesona
-Asa fampaherezan’ny Fifohazana: ny Birao SAFIF mijery ny fepetra ara-pahasalamana ho an’ny Mpiandry manatanteraka ny Asa.
Fivorian’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo: alahady 25 aprily aorian’ny fanompoam-pivavahana
Ny hira FF10 « Mivavaka aho satria » no nohiraina nandritra ny fanantazana ny rakitra. Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fananana no tompon’anjara nananty rakitra. Ny hira « Misaotra Anao ‘zahay» no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.
Ny Mpitandrina RAKOTOMALALA Finaritra no nanao ny vavaka fangatahana.
Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny fitantanany ny fiainan’ny tsirairay. Nangataka ny fanampian’Andriamanitra mba tsy hialana Aminy. Mba hijery ny tokantrano, mba hampitomboany ny fifandraisana Aminy.
Nivavaka ho an’ireo marary ny covid19 sy aretina maro samy hafa. Jesoa no mpanasitrana koa mangataka ny fanasitranana Aminy. Ao ireo fianakaviana reraka mikarakara marary, manana havana maty, koa mangataka ny homen’i Jesoa hery. Nangataka fitahiana ho an’ireo dokotera sy mpiasan’ny fahasalamana. Mba hiakin-doha amin’Andriamanitra izy ireo fa tsy amin’ny fahaizany. Nitondra am-bavaka ny mpianatra izy tapaka ny fianarana. Jesoa mahay ny zavatra rehetra sy mahay mandamina ny zavatra rehetra.
Nitondra am-bavaka ho an’ny fiveloman’ny tsirairay, mijery ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana, hanome ny sahaza ny tokantrano tsirairay avy.
Nitondra am-bavaka ho an’ny kristiana rehetra ato amin’ny Fitandremana. Nangataka vonjy amin’ny fitaintainana, tebiteby, alahelo.
Nisaotra an’Andriamanitra ny amin’ireo efa sitrana. Nisaotra koa amin’ny valim-bavaka rehetra na ny nangatahana na tsia.
Izany vavaka izany dia Amin’ny anaran’i Jesoa izany nampianatra nivavaka hoe:
“Rainay Izay any an-danitra”
Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 435: 4 « Mafy re ny ady, maro be no voa » ary novakina ny tondrozotra 2021.
Nohiraina ny FFPM 632: 1 sy 5 « Ampianaro aho, Tompo, mba hiambina! », nofaranana tamin’ny Amena nohiraina.
Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra!
Mandehana amin’ny fifalian’ny Tomponao
Ireo tompon'anjara :
Nikirakira ny fafana : RABIAZAMAHOLY Mahery
Nikirakira ny fanamafisam-peo sy naka ny horonan-tsary ary sary : HARENTSOA Rova
Nitendry orga: RAJAOFETRA Philippe